Inona no ho hita amin'ny faritra Balkan | Vaovao momba ny dia
Susana Garcia | | Fialantsasatra any Eropa
Una lalana mamakivaky ny Balkans mety ho traikefa nahafinaritra. Miresaka momba ny faritra somary tsy fantatra any Eropa izahay, nefa io no tranon'ny mpizahatany tena. Ny adilahy tato ho ato toa an'i Kosovo na Bosnia dia mbola tadidin'ny maro, fa ity faritra ity dia teraka indray ho toerana fizahan-tany mahafinaritra.
La Ny velaran'i Balkan dia malalaka. Ho an'ny maro dia ilay faritra izay tany Iogoslavia teo aloha, miaraka amin'i Albania sy Makedonia. Saingy, amin'ny sari-tany dia tsy mitovy ny firafiny, manasongadina an'i Bosnia sy Herzegovina, Albania, Serbia, Kroasia, Kosovo, Makedonia na Montenegro.
1 Torohevitra momba ny dia mankany Balkans
2 Dubrovnik any Kroasia
3 Sarajevo any Bosnia sy Herzegovina
4 Plitvice any Kroasia
5 Ohrid any Makedonia
6 Mostar any Bosnia sy Herzegovina
7 Misaraka any Kroasia
Torohevitra momba ny dia mankany Balkans
Raha mandeha mamaky an'i Balkans, toy ny any amin'ny firenena hafa, tsara ny mandinika kely ny tantarany. Amin'ity fomba ity ihany no hahafantarantsika tsara kokoa ny fanaon'izy ireo ary ho tsapantsika ny tena lanjan'ny tsangambato sy ny fomba fanaovan-javatra. Zava-dehibe indrindra ny fahalalana zavatra momba ireo fomba amam-panao ireo raha mankany amin'ny firenena izay tsy mitovy amin'ny antsika isika, mba tsy hikorontana be loatra. Tokony ho raisina izany fa amin'ny ankamaroan'ny firenena Balkan mampiasa ny volany manokana izy ireo, ny sasany toa an'i Slovenia ihany no nanatevin-daharana ny fampiasana ny euro. Raha ny vidiny, mazàna dia mora vidy izy io, mora vidy kokoa noho ny any amin'ireo tanàna eropeana lehibe. Tokony hitondra ny pasipaoronao ianao, toy ny any amin'ny firenena maro izay takian'izy ireo, ary aza hadino ny momba ny fiantohana amin'ny dia.
Dubrovnik any Kroasia
Dubrovnik dia iray amin'ireo toerana fizahan-tany indrindra amin'ity faritra ity ankehitriny, indrindra noho ireo morontsiraka lehibe ananany. Aza adino ny ivon-toerana kanto manan-tantara, nambara Lovan'ny zanak'olombelona avy amin'ny unesco. Ireo mpankafy ny Game of Thrones dia hanaiky ity tranonkala ity ho ilay iray ampiasaina hisolo tena ny 'King's Landing'. Ny Puerta de Pile no fidirana lehibe mankamin'ny tanàna medieval. Mila mandeha mamaky ny rindrin'ny medieval malaza manodidina ny tanàna ianao, izay efa ho roa kilometatra ny halavany. Stradun Street no faritra afovoany indrindra ary misy ny Loharano Onofrio sy ny Santo Domingo Monastery. Raha tsara ny andro, azo atao ny mandany andro iray eo amin'ny morontsirak'i Gradska Plaza, metatra vitsivitsy miala ny tanàna.
Sarajevo any Bosnia sy Herzegovina
Ny tapany taloha amin'ny Sarajevo dia antsoina hoe Baš? Aršija na Tiorka Tiorka. Eo afovoan'ny kianja misy anarana mitovy dia ny Loharano Sebilj tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Ao amin'ny foibe manan-tantara dia misy moske maromaro, satria misy kolontsaina marobe io tanàna io, toa ny moske Gazi Husrev Bey na Moske'ny Emperora. Trano fivavahana hafa koa dia ny Katedraly Orthodoksa, ny Katedraly Heart Sacred na ny Synagoga Sarajevo. Ilaina ny fitsidihana ny tetezana latinina, satria io no sehatra namonoana an'i Archduke Francisco Fernando, tranga iray izay nahatonga ny Ady lehibe voalohany.
Plitvice any Kroasia
Amin'ny làlana mamakivaky an'i Kroasia dia tsy mila mijanona ao Dubrovnik fotsiny ianao. ny Plitvice Lakes Nature Park tena paradisa io. Azonao atao ny manao làlana hijerena ireo farihy turquoise, riandrano mahafinaritra ary natiora bibidia izay tsy mamela olona tsy hiraharaha. Manodidina ny 200 km miala an'i Zagreb no misy azy. Izy io dia valan-javaboary tena midadasika, fa ny làlana lehibe dia mamaky ny riandrano be mpitsidika indrindra. Na izany aza, ho an'ireo izay te handany ny tontolo andro dia misy làlana fitsangantsanganana hatramin'ny adiny valo.
Ohrid any Makedonia
Ohrid dia iray amin'ireo toerana be mpitsidika indrindra eto Makedonia. Izany dia tranom-pivavahana tsy tambo isaina. Izy io dia manana fiangonana Byzantine tsara tarehy, monasitera ary trano toa ny amphitheatre. I Sant Jovan Bgoslov Kaneo no fiangonana be mpaka sary indrindra, satria eo akaikin'ny hantsam-bato misy fahitana miavaka amin'ny farihy no misy azy. Toerana hafa jerena ny Katedraly Santa Sofía, ny Fiangonan'i San Clemente y Pantalón na ilay tanàna antitra tsara tarehy.
Mostar any Bosnia sy Herzegovina
Mostar dia tanàna tsara tarehy, renivohitra ara-kolontsaina ao Herzegovina. Ny iray amin'ireo zavatra miavaka indrindra dia ny tetezana tsara tarehy sy angano an'ny Stari Most, natsangana tamin'ny taonjato faha-1993 ary nopotehina tamin'ny 2004 nandritra ny ady Yugoslavia, haverina amin'ny XNUMX. Ao amin'ity tanàna kely ity dia ahitanao trano vato tsara tarehy namboarin'ireo faritra an-tendrombohitra. Toerana iray azo jerena ao anatin'ny iray andro izy io.
Misaraka any Kroasia
Ity tanàna ity dia an'ny fanjakana romana ary izany no antony ahitanao tsangambato maro sy taolam-biby arkeolojika. ny Lapan'i Diocletian Fitsidihana tena ilaina izy io, fa koa toerana toa ny Tempolin'i Jupiter. Ny katedraly San Diomo dia manana tilikambo amin'ny fomba Romanesque-Gothic. Mampiseho amintsika bebe kokoa ny tantaran'ny Kroasia ny Tranombakoka Arkeolojika, ary izy no iray amin'ireo tranainy indrindra amin'ny firenena. Betsaka koa ny morontsiraka amin'ity faritra ity, toy ny morontsiraka Bacvice afovoany. Ampahefatry ny ora amin'ny alàlan'ny fiara, any Marja, misy valan-javaboary mahafinaritra hahafinaritra tanteraka ny natiora.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » Inona no ho hita any amin'ny Balkans
Inona no ho hita any Florence